Nagu saabsan - iGeneration Youth
Waxaan nahay wariyeyaal da ‘yar iyo farshaxanno muuqaal ah oo ka kala yimid adduunka oo idil oo baranaya sida ay u shaqeyso daabicitaanku. Laga soo bilaabo abuuritaanka nuxurka illaa xayeysiinta iyo suuqgeynta jadwalka wax soo saarka, waxaad ka heli doontaa dhalinyaro door kasta.
Waxaan nahay daabacayaasha IGeneration Youth iyo iGeneration Youth for Kids, laba war oo bille ah iyo daabacado qaab nololeed oo lagu soo daabacay daabacaad iyo khadka tooska ah. Qoraallada Dhallinyarada iyo Qoraallada Dhallaanka waxaa ruqsad ka haysta Adeegyada Wararka ee Tribune, oo u qaybiya waxyaabo badan oo warbaahin ah in ka badan 2,000 oo warbaahin iyo daabacayaasha macluumaadka dhijitaalka ah ee ku dhowaad 100 dal Inaan la toocin geeskeena; waxaan nahay daabacaadaha kaliya ee dhalinyarada ee shati ka haysta mid ka mid ah “afarta waaweyn” ururrada wargeysyada Mareykanka.
Waxaan haynaa koox xoog badan oo lataliyeyaal ah, oo ay ku jiraan halyeeyo ka tirsan qaar ka mid ah ururada waaweyn ee wararka adduunka, kuwaas oo na barbaariya oo na hagta maadaama aan noqoneyno jiilka soo socda ee saxafiyiinta. Iyadoon laga soo xiriirin soohdimaha juqraafiyeed, waxaan soo tabinnaa wararka ku saabsan dadka, meelaha, iyo arrimaha muhiimka ah ee la xiriira saamaynta maxalliga, qaran, iyo guud ahaanba adduunka. Anagoo adeegsaneyna awooda internetka, waxaan lashaqeynaa bulshooyinka aan lagaraneyn, anagoo tooshka ku ifineyno sheekooyinkooda inta badan aan lagaraneyn oo aan horey loo maqal.
Waxaan nahay hal abuurayaal hadafkoodu yahay inaan balaarino xuduudaha sheekada. In kasta oo aad si xaqiiqo ah u heli doontid maqaalo toos loo soo tebiyey oo lagu turjumay qaabab dhaqameed, hadafkeenu waa inaan ku dhalino xiisahaaga astaamo hami leh oo lagu keenay qaabab dabiici labaad u ah jiilkeena. Waad ku raaxeysan kartaa warbixinnadayada kala duwani ee warbaahinta badan, su’aalaha, ciyaaraha, iyo fiidyowyada madal kasta, laga bilaabo miiskaaga illaa iPad-kaaga iyo taleefankaaga gacanta.